3d प्रिन्टर, लेजर मेशिन, 3d नक्काशी - एक्युबमेकर
TOYDIY 4in13डी प्रिन्टर
EcubWare 2.२.१ म्यानुअल
एक पुनर्विक्रेता हुनुहोस्
Inter विनिमय योग्य कार्यात्मक मोड्युलहरू
उच्च मुद्रण गति र उच्च मुद्रण प्रेसिजन
विभिन्न सामग्रीहरूमा कुनै पनि ढाँचा, छवि, डिजाइन नक्काशी गर्नुहोस्
TOYDIY 4-in-1 3D प्रिन्टर
दोहरो रंग3डी प्रिन्टिंग
कम फिलामेन्ट अपशिष्ट र र Color्ग मिश्रण छैन
नक्काशी, विभिन्न सामग्रीमा मिल सतह
Un नवीनताहरू तपाईंको असीमित आवश्यकताहरू पूरा गर्न
हामीसँग अग्रसर सुविधाहरू छन् जुन तपाईं चाहनुहुन्छ
फोर-लेयर्स हीटिएबल म्याग्नेटिक प्लेटफार्म
--इन -१ स्लिसि Software सफ्टवेयर
१x०x१80०x१80० प्रिन्ट आकार
TOYDIY 4-in-13डी प्रिन्टर के गर्न सक्दछ
थप कार्यहरू, अन्वेषण गर्न थप विकल्पहरू
एडवर्ड स्कट द्वारा
स्पाइडरम्यान थ्रीडी प्रभाव
मार्क जोनसन द्वारा
+०००+ प्रयोगकर्ताको समुदायले मनपरायो
अन्य प्रिन्टरहरूको बारेमा पढी सकेपछि र केहि प्रयोग गर्न सक्षम भएपछि, म मानिसहरूलाई भन्छु कि यो प्राप्त गर्न र सिक्नको लागि यो सब भन्दा राम्रो पहिलो थ्रीडी प्रिन्टर हो। यदि निर्माण स्थान एकदम सानो छ भने ठूलो प्रिन्टरमा जानुहोस्। मैले यो आफ्नै व्यवसाय उद्देश्य र प्रेमको लागि प्रयोग गरेको छु। यो मेशिन यति धेरै।
मँ केहि नयाँ सामानहरु जान्नको लागि उमेरको छैन!
मेरो ToyDIY4मा 1 राम्रो काम गर्दछ!
GoPro माउन्ट हतियारहरू १%% इन्फिलको साथ अलि कमजोर छन् त्यसैले मैले यसलाई 50० %सम्म बढायो ... र फाइलेन्ट अस्थायी तरीकालाई २१० से।
मैले प्रिन्ट रोक्न र राफ्टलाई टेप गर्न सिकें बिस्तरको आसंजनको लागि बढेको बीमाको रूपमा।
लेजरले वास्तवमै मेरो घरको आईप्याड स्ट्यान्डमा लुगा लगाउँदछ।
यहाँ केहि साना ग्याजेटहरू छन् जुन मैले योजना गरे र प्रिन्ट आउट गरे: एक्स्टेन्सन कर्ड क्लिपहरू यसलाई रेडिएटरको शीर्षमा समात्नुहोस्। नयाँ झुकाव मेरो किबोर्डको लागि खडा हुन्छ। त्यो हाँसउदो हेर्ने प्लेट मांसपेशीको दुखाइ र तनाव हटाउने हो, तपाईं थालको उपयुक्त कुनामा एक दुखाइ पोइन्टमा मसाज गर्नुहुन्छ।
एक गोल बिजुली बक्सको आवश्यक छ, केवल एक प्रिन्ट गर्नुहोस्। प्रिन्टर मुद्रित राफ्ट एक रंगमा सेल्फ लोडिंग र आवश्यकता फिलामेन्ट अनलोडिंग गरेर। चुम्बकीय आधार शानदार छ। सबै कुरा कुनै प्रयास बिना अलग हुन्छ।
फेस मास्क तयार छ! यस समयमा केहि उपयोगी बनाउनु भएकोमा खुशी छ।
जेनिफर थोरप व्हिटमर
नयाँ लेजर प्रोग्रामले धेरै राम्रो र सफा बर्न गर्दछ! सुधारिएको कार्यक्रम को लागी धन्यवाद!
गोल्डन्स जky्कार्ड फार्म
यो चाँडै आइपुगे र प्रसेम्बेल्ड। धेरै सजीलो प्रयोग गर्न सक्दछु र सबै भन्दा धेरै म कृपया माइनस गर्दछु मलाई लाग्छ कि मैले एकलdडी प्रिन्टर हेड हराइरहेको छु र मलाई आशा छ कि त्यहाँ चीजहरूको सफ्टवेयर पक्षको सम्बन्धमा गहिराइ सिक्ने सामग्रीहरू बढी थिए। मैले यूट्यूबमा मेरो आफ्नै समीक्षा थपें ​​र तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ कि लेजर हेडले भयesome्कर कार्य गर्दछ।
धमाधम !! यद्यपि यो मेरो पहिलो थ्रीडी प्रिन्टर हो- यसमा काम गर्नको लागि मैले यति धेरै मुद्दा भेट्टाएको छैन। केवल एक घण्टा4कार्यहरूको बारेमा जान्नको लागि लिनुहोस्। सबै परीक्षण प्रिन्ट SD कार्डमा प्रदान पूरा भयो। र समग्र म भन्न सक्दछु यो शान्त प्रभावशाली छ।
थप विवरणहरूमा जानुभन्दा पहिले म त्यो उल्लेख गर्न चाहान्छु- उनीहरूको ग्राहक सेवा महान् थियो। मैले उनीहरुसँग सीएनसी मिलि duringको क्रममा एउटा गडबडको लागि सम्पर्क गरें। र तिनीहरू एक क्षणमा उचित विवरणको साथ जवाफ दिन्छन्। त्यो ठूलो काम हो!
अहिले सम्ममा म सामान्य प्रिन्टहरूको परीक्षण गर्दैछु र 30० घण्टाको प्रिन्टमा आधा बाटोमा छु। प्रिन्टर एमेजोनबाट छिटो आएको थियो, र यो राम्रोसँग प्याक गरिएको थियो। मैले बाकस खोल्दा कुनै पनि चीज बिग्रिएको थिएन र यसलाई अनप्याक गर्न सजिलो भयो। कुनै पनि आन्दोलन रोक्न चीज फोमले ढाकिएको थियो, र सबै टाउकोहरू बुलबुला र्‍यापिंगमा थिए। यो पनि खोल्न सजिलो थियो।
केही हप्ता अघि मेरो सबैभन्दा राम्रो साथी मोली बिरालोको मृत्यु भयो। म उनको लागि एक सानो स्मारक बनाउन चाहान्थें र ToyDIY को सबै तीन कार्यहरू प्रयोग गर्न पनि मिल्यो।
म कुनै पनि मुद्दाहरू बिना बक्स बाहिर यो प्रिन्टर प्रयोग गर्न सक्षम भयो। मैले यो २०२० को फेब्रुअरीमा स्कूल परियोजनाहरूको लागि प्रयोग गर्न खरीदें। मलाई त्यस समयमा थ्रीडी प्रिन्टि,, लेजर ईचिching वा CNC कुँदिएको बारेमा केही थाहा थिएन।
मसँग एक महिना वा थ्रीडी प्रिन्ट हेडको साथमा मुद्दा छ र धेरै चाँडै प्रतिस्थापन पठाइएको थियो।
कम्पनी चीन मा कार्य दिन को समयमा प्रश्न र मुद्दाहरूको जवाफ दिन छिटो छ, त्यसैले प्रतिक्रिया समयमा एक सानो ढिलाइ छ। तर तिनीहरू समयको फरकलाई ध्यानमा राखेर तुरून्त जवाफ दिन्छन्।
धेरै राम्रो प्रिन्टर! अहिले सम्म एकल फिलामेन्ट प्रिन्टहरू मात्र बनाइएको छ, तर केवल भिडियोहरू जस्तै फाइल लोड गर्नुहोस् र बटन थिच्नुहोस्। अर्को म लेजर प्रकार्य प्रयास गर्नेछु।
म सँधै--इन -१ प्रिन्टर चाहान्छु (FDM प्रिन्टि,, CNC नक्काशी, र लेजर कुँदिएको साथ) तर यी मेशिनहरू धेरै महँगो हुन्छन्। त्यसैले जब मैले a-इन -१ प्रिन्टर भेट्टाए जुन अरू भन्दा धेरै सस्तो थियो, मैले यसको लागि जानुहोस् र मेशिनको बारेमा के सोच्थें भनेर निर्णय गर्ने निर्णय गरें। र म आफ्नो खरीद संग धेरै खुसी छु।
Ecubmaker 4-in-1 प्रिन्टर एकदम राम्रो प्याकेज गरीन्छ। त्यहाँ ठूलो साना, लेबल बक्सहरू भित्र ठूलो बाकस भित्र छन् - यी बक्सहरूको भित्र तपाईं tool उपकरण टाउको, फिलामेन्ट, फिलामेन्ट होल्डर, र उपकरणहरू / भागहरू फेला पार्न सक्नुहुनेछ। ठूलो बाकस भित्र तपाईं प्रिन्टर बडी फेला पार्न सक्नुहुनेछ, पहिले नै जम्मा गरिएको। यस प्रिन्टरलाई न्यूनतम असेंबली चाहिन्छ - तपाईंले गर्नुपर्ने भनेको आवश्यक उपकरण हेड संलग्न गर्नुहोस् र प्रिन्टि start सुरु गर्नुहोस्! प्रिन्टर प्रयोग गर्नु अघि, म प्रिन्टरमा गहन दृष्टिकोण राख्न चाहान्छु र यसको संरचना।
यस मेशीन को प्रयोग धेरै छ। यसैले म मेरो थ्रीडीप्रिंटर मन पराउँछु। मसँग यो4कार्य को बारे मा चिन्ता गर्न आवश्यक छैन। र ती कार्यहरूको गुणवत्ता वास्तवमै धेरै राम्रो छ।
स्वत: लेबलिंग सुविधाहरूले मलाई प्रिन्टिंग समस्या हुनबाट मद्दत गर्दछ। प्लेटफर्म कहिल्यै तातो हुने छैन गर्मी अवशोषित टेक्नोलोजीको कारण। त्यसैले म सजिलैसँग मेरो थ्रीडी प्रिन्टि right ठीक बाहिर समाप्त गर्न पछि यसलाई लिन सक्दछु।
र एउटा अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा यो हो, यसलाई कुनै भेलाको आवश्यक पर्दैन, यसको प्रि इम्सबल मेसिन। आजकल त्यहाँ केहि मेशीन छन् जसले यस प्रकारको प्रणाली दिन्छन्।
यो प्रदान गर्ने डिजाईनका लागि सफ्टवेयर, सामग्रीमा पनि धेरै धनी छ। म सजीलै सम्पादन गर्न सक्दछु वा इकुबवेयर सफ्टवेयरको साथ मेरो मोडेल डिजाइन गर्न।
म सबैलाई सिफारिस गर्दछु कि यो मेशीन किन्नको लागि, यसको अग्रिम सुविधा र कार्यहरूको साथ धेरै तुलना गरेर यसको सस्तो।
ठूलो काम गर्नुभयो! सबै विज्ञापनको रूपमा राम्रोसँग आयो। अहिले सम्म लेजर उत्कीर्ण गरेको सबै भन्दा बढि गरेको छ र वास्तवमा यस सानो मेशिनबाट प्रभाव मन पर्छ। मेरो प्रिन्टर पठाइनु भन्दा पहिले मैले केहि इन्द्रेणी फिलामेन्ट ल्याए। पहिलो पटक प्रयोगको राम्रो नतीजा भयो। मलाई आशा छ कि त्यहाँ भेट्टाउने र सिक्ने धेरै कुरा छ।
मेरो छोराको जन्मदिनको लागि किन्नका लागिdडी प्रिन्टर खोज्दै। केहि दिन लिन निर्णय गर्नुहोस् र अन्तमा यस inin1 लाई ल्यायो। वास्तवमै यसको लायक छ! केही थ्रीडी प्रिन्टि try प्रयास गर्न र केही काठ लकहरू लेजरको लागि केही हप्ता काम गर्नुभयो। मैले फेला पारे कि लेजर प्रयोग गर्न एकदम चाखलाग्दो छ, यद्यपि मैले आफ्नो प्रिन्टरलाई मेरो सुरक्षाको लागि मेरो ग्यारेजमा सारिदिएँ!
Toydiy 4in1 को साथ मेरो पहिलो परियोजना सकियो। धेरै भागहरू मुद्रित गरियो र सँगै भेला भए। जे होस् सेटिंग्स को कारण केहि विफलता को प्रयास, तर समर्थन संग सानो कुराकानी पछि यो ठीक भयो। समग्रमा मलाई यो प्रिन्टर मन पर्छ।
इकुबमेकरले मेकर्सको सपना पूरा गर्नका लागि पाल सेट गरे। प्रारम्भिक कम्पनी मध्ये एक बहु-कार्यात्मक थ्रीडी प्रिन्टरको विकासको लागि अगाडि बढ्ने कम्पनीका रूपमा, एक्युबमेकरले यसको नवीनता र मानक गुणवत्ताको लागि प्रशंसा गरे।
२०१ 2013 मा हाम्रो स्थापना भएदेखि, हामी बिभिन्न उच्च गुणस्तरको डेस्कटप थ्रीडी प्रिन्टर श्रृंखला विकास गर्छौं जस्तै काल्पनिक। काल्पनिक श्रृंखला मा सफलता प्राप्त पछि हाम्रो अर्को लक्ष्य केहि विकसित गर्न को लागी के रचनाकारहरु को मद्दत गर्न को लागी एक सेवा गर्न को लागी धेरै कार्य गर्न सक्छ के विकास गर्न को लागी थियो। साथै मेशिनमा मेसिनमा स्विच गर्न पैसा र समय बचत गर्न सक्दछ। अन्तमा, हामी हाम्रो लक्ष्य पुगेको। २०१ In मा हामी विश्वको पहिलो-इन -१ थ्रीडी प्रिन्टर नाम प्रक्षेपण गर्दछौं: TOYDIY 4-in-1। जसमा FDM एकल रंग, FDM डुअल र color्ग 3D प्रिन्टि,, लेजर उत्कीर्णन, CNC अन्य पेशेवर सुविधाहरु संग नक्काशी गरीएको थियो।
हामीसँग R&D टीममा १० भन्दा बढी सदस्यहरू छन्। ती सबैले साधारण उपभोक्ताहरूलाई थप साधारण उपभोक्ताको लागि केहि आविष्कार गर्ने सपना पछ्याउँदछन्। तिनीहरू केहि गर्न कटिबद्ध छन् जुन कलेजका विद्यार्थीहरूले प्रयोग गर्न सक्दछन्। एक मध्यम आयु अभिभावक वा सेवानिवृत्त hobbat। TOYDIY 4-in-1 तिनीहरूको भक्ति प्रमाणित गर्न उत्तम उदाहरण हो। एक पेशेवर सफ्टवेयर को विकास उनीहरूको लागि ठूलो चुनौती थियो। केहि कठिन चरण पार गरे पछि हामीले यो गर्यौं। अहिले TOYDIY एक पूर्ण अनुकूलित बहु-उपकरण3डी प्रिन्टर हो जसले धेरै प्रविधी प्रेमीहरूको हृदय जीत गर्दछ।
थ्रीडी प्रिन्टिंग उद्योग र यसको प्रगतिमा यस योगदानलाई जारी राख्न हामीलाई हाम्रो सय प्रतिशत दिने प्रतिज्ञा गरिएको छ। हामी प्रयोगकर्ता जीवन अधिक र अधिक सजिलो बनाउन काम गर्दैछौं। हामी चाहन्छौं कि तपाईं हामीसँग आउनुहोस् र हामीमध्ये एक बन्नुहोस् जो विश्वास र आविष्कारमा विश्वास गर्दछ।
प्याटेन्ट र प्रतिलिपि अधिकार
एक वितरक बन्नुहोस्